Famoronana asa, fambolena, lalana, fandraharahana: hiantraika amin’ny Malagasy maro ny famatsiam-bolan’ny Banky iraisam-pirenena | NewsMada
Famoronana asa, fambolena, lalana, fandraharahana: hiantraika amin’ny Malagasy maro ny famatsiam-bolan’ny Banky iraisam-pirenena
Par Taratra sur 22/07/2021
Nanoratra tantara ny fitondram-panjakana, ankehitriny. Nisitraka famatsiam-bola avy amin’ny Banky iraisam-pirenena i Madagasikara. Nambaran’ny filoha Rajoelina Andry tamin’izany fa miezaka tanteraka ny fitondrana tarihiny ary hisy vokany eo amin’ny fiainam-bahoaka izany.
« Miasa izao fitondrana izao. Sambany teo amin’ny tantaran’ny firenena ny nahazoana fanampiana mitentina 1 miliara sy 100 tapitrisa dolara », hoy ny lahatenin’ny filoha Rajoelina Andry, narahin’ny tehaka mirefodrefotra teny Iavoloha, omaly. Vita sonia tamin’izany ny famatsiam-bolan’ny Banky iraisam-pirenena, niarahana amin’ny solontenan’izy ireo, U. Marie-Chantal sy ny minisitry ny Vola, Randriamandrato Richard. Natokana ho an’ny tetikasa maro izany famatsiam-bola izany ary hiantraika mivantana amin’ny fiainan’ny vahoaka amin’ny ankapobeny.
Fanamboarana ny lalam-pirenena RN2
Anisan’izany ny fampiroboroboana ny fambolena. « Eo koa ny fanamboaran-dalana ka anisan’izany RN2. Fanamby atao izany satria betsaka ny fotoana lany raha ratsy ny lalana ary lafo ny fitaterana. Mihalafo koa ny vokatra sy ny entana ilaina amin’ny fiainana andavanandro (PPN) », hoy izy. Notsindrin’ny filoha fa atao laharam-pahamehana avokoa izany ary hiantraika amin’ny andavanandron’ny Malagasy. Eo koa ny lafiny fahasalamana ka hanafarana vaksiny iadiana amin’ny covid-19 ny 100 tapitrisa dolara. Manampy izany ny fisitrahana ny tohana avy amin’izany famatsiam-bola izany ho an’ ireo mpandraharaha. Ny fanohanana sy fanatsarana ny lafiny fanabeazana sy ny famoronana asa ho an’ireo tanora. Hahazo tombony amin’izany ireo very asa noho ny hamehana ara-pahasalamana.
500 000 ireo nisitraka ny tosika fameno
Nanterin’ny filoha Rajoelina Andry tamin’izany fa maherin’ny 500 000 ireo nisitraka ny tosika fameno tamin’izany vola izany. Miisa 2 500 000 kosa ireo tanora avotra noho ny fanampiana ara-bola ka nandroso sy nivoatra ny fiainany, araka ny nambarany hatrany.
Anisan’ny niatrika izany fifanaovan-tsonia izany ny praiminisitra sy ireo mpikamban’ny governemanta. Teo koa ireo olom-boafidy, ahitana depiote sy loholona ary koa ny governora, miaraka amin’ny solontenan’ireo avy amin’ny sehatra iraisam-pirenena.
Synèse R. sy Fano